जन प्रतिनिधिहरूसँग जनताका अपेक्षा
देश संघीय संरचनामा गईसकेपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। जनताहरूले मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुनिसकेको अवस्था छ। निर्वाचन सम्पन्न भए सँग-सँगै अब देशमा संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हुने र विकासको प्रक्रियाले फड्को मार्नेमा सबै जनताहरू विश्वस्त छन्। वि.स. २०४७ देखि हालसम्म चलिरहँदा थुप्रै घटनाक्रमहरू विकसित भए। विशेष गरी सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रिया… पुरा पढौ
'पुस फासफुस’ यो उखान यत्तिकै चलेको होइन। छोटा दिन भएकै कारण यसो भनिदै आइएको छ। हुनत पुस-माघका दिन छोटा हुन्छन् नै तर यसमा पनि कति गते भनेर सोधियो भने के भन्नुहुन्छ - पन्ध्र पुस वा पुस १ गते ! यिनै गतेलाई वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन हो भन्नुभएको छ भने तपाईं भ्रममा हुनुहुन्छ। यस वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन ६ गते (डिसेम्बर… पुरा पढौ